Itoobiya ayaa Sabtidii ku dhawaaqday in ay ku soo oogeyso siyaasiyiin mucaarad ah oo ay ku jiraan Jawar Mohammed iyo Bekele Gerba dambiyo ay ka mid yihiin argagixisanimo iyo hurinta rabshado, tallaabadaas oo sii hurineysa xiisadaha ka taagan gobolka Oromada ee xasaradaha ka jiraan.
Eedeymaha - oo keeni kara xabsi daa'in – ayaa la xiriira rabshadihii ka dhashay dil toogasho ahaa oo bishii June lagu dilay Hachalu Hundessa, oo ahaa heesaa caan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada, kaasi oo fankiisa kusoo bandhigi jiray faquuqida siyaasadeed iyo dhaqaale ee Oromada.
Jawar iyo Bekele ayaa ka mid ah in ka badan 9,000 oo qof oo lagu xiray qabqabasho wadareedyo xigay dilkii fannaanka, tallaabadan oo kicisay dhaleecayn ah in Abiy uu u adeegsanayo rabshadaha si uu u aamusiyo kuwa ay siyaasadda isku diidan yihiin iyo dadka isaga dhaleeceeya.
Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaa qoraal uu Sabtidii ku daabacay Facebook ku shaaciyay dacwadaha ka dhan ah 24 eedeysane.
Eedaha ayaa waxaa ka mid ah "isku day ah in la kiciyo rabshado salka ku haya qowmiyad iyo diin si la isaga horkeeno muwaadiniinta.”
Eedeysanayaasha kale waxaa ka mid ah dhowr qof oo caan ah oo dhaliila Abiy oo ku nool dalka dibaddiisa sida dhaq-dhaqaaqaha caanka ah ee reer Oromo, Tesgaye Regassa, iyo nin olog la ahaan jiray Abiy oo isku bedelay mucaarad, Berhanemeskel Abebe.